Wasaaradaha internetka - Ilaah waa cajiib
Rabbigeenna Ilaaha Qaadirka ahu waa cajiib, waayo, isagu waa Ilaah weyn. Jannada iyo Earth kuma jiri karaan isaga waayo wuxuu ka weyn yahay wixii aynu aragno oo aan ognahay. Sharaftiisu waa sharaf iyo awooddiisa oo aan qiyaas lahayn. Aabbahayaga jannada ku jira waa mid quduus ah oo jacaylkiisuna waa weligiis. Xigmaddiisu way dhaaftaa dhammaan fahamka aadanaha. Jannada iyo Earth si joogto ah u heeso ammaantiisa isaga oo u qalma.
Ma jiro qof kale sida Eebaha, waayo, isagu waa boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada. Raggu waxay raadin doonaan nabadgelyo xilligii dagaalada, laakiin waxay heli doonaan oo kaliya haddii ay raadsadaan Prince of Peace. Nabadgelyada runta ahi waxay ka timaadaa Rabbigeenna Ilaaha Qaadirka ah iyo nabadgelyadiisa oo dhan ka sarreeya fahamka. Rabbiga ka doondoon dhamaan qalbigiinna oo ogow in uu kuugu dhow yahay. Ilaah wuxuu kuu yahay adigoonan kaaga tegin xitaa markaad ku dhibtooneyso jirdil iyo dhib. Ha cabsanina, waayo, Rabbigu waa idin siiyey, oo wuxuu addeecay codka Rabbiga.
Ilaah wuxuu inooga dhigay mid ka mid ah Ciise, oo dhiiggiisa isaga ayaan u noqonay istaahila Ilaah, waayo, wuxuu nadiifiyey dembiyadayada. Aabbahayaga jannada ayaa naga furay wanka. Waannu daahirnay oo xaq ku noqday magaca Rabbi Ciise Masiix iyo Ruuxa Quduuska ah ee Rabbiga ah Ilaaha Qaadirka ah. Ciise Masiix oo ah hoggaanka ugu weynaa ayaa si adag u meeleeyay annaga oo ku jira macbud qaali ah oo macbadka ah oo u adeega sida Ilaah hoy u ah Ruuxa Quduuska ah. Aabbahayaga Quduuska ahi waa istaahilaa wakhtigaaga iyo adeegga beerta canabka ah ee Rabbiga.
Rabbiga ku kalsoonow qalbigaaga oo dhan oo ogow in uu ku dhaqmi doono. Marwalba ogow inaadan keligiis aheyn oo aadan u malaynin malaa'igaha adeegayaasha ah ee ku saabsan badbaadada. Rabbigu wuu idin jecel yahay, oo isna wuu idinla jiraa. Bal yaa istaagi doona Rabbiga ciidammada? Qofna ma awoodi karo cidna weligeed ma noqon doonto. Qalbigayguna wuu weyn yahay, waayo, Garashadiisu waa ku wanaagsan tahay xagga Rabbiga. Mahad leh Eebahay Ilaaha Qaadirka ah, waayo, isagu waa istaahilaa.
Kaniisadaha Masiixa ayaa kugu soo dhaweynaya inaad naga caabudo Rabbiga. Waxaan halkan u joognaa inaan Ilaah u adeegno oo kaa caawino socodkaaga Rabbiga. Booqo kaniisadda Masiixa ee beeshaada.
Had iyo goor waa raaxo u adeegidda kaniisadda Rabbiga. Haddii aan noqon karo wax adeeg ah fadlan ha ka waaban inaad wacdo. Waad i soo waci kartaa wakhti kasta adoo telefoonka kula (319) 576-7400 ama email ahaan: Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view..